Sidee Internetka U Kacdoon U Sameeyay Tafaariiq La'aan | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 1, 2016 Jimco, Nofeembar 17, 2017 Douglas Karr
Haddii aadan maqal, Amazon waxay furaysaa shabakad ballaaran oo ah dukaamada pop-up dukaamada Mareykanka, oo leh 21 dukaan oo ku yaal 12 gobol oo horeyba loo furay. Awoodda tafaariiqda ayaa sii wadda inay soo jiidato macaamiisha. In kasta oo macaamiil badani ka faa'iideysanayaan heshiisyada khadka tooska ah, la kulma badeecad qof ahaan weli miisaankeedu sarreeyo oo ay leeyihiin dukaamaysanayaashu. Xaqiiqdii 25% dadku waxay wax iibsadaan kadib baaris maxalli ah oo 18% ka mid ah lagu sameeyo 1 maalin gudahood
Internetku wuxuu bedelay sida ganacsiyada u shaqeeyaan macaamiishooduna u dukaameystaan ​​weligood. Waxyaabaha fudud sida macaamiisha raadinaya lambarka taleefanka ee dukaan ku yaal internetka illaa horumarinta internetka ee waxyaabaha (IOT) - muuqaalka tafaariiqda ayaa si aad ah isu beddelay. Waxaa muhiim u ah dukaamada inay sii joogteeyaan ama ay halis ugu jiraan in gadaal looga tago. Storetraffic.com
Sawir-gacmeedkan ka socda taraafikada Bakhaarka ayaa bixinaya sawir ah sida Internetku u leeyahay una sii wadi doono inuu ka ciyaaro duub khibrad u leh wax soo iibsiga. Aasaaska aasaasiga ah waxaa ka mid ah hubinta goobtaada ganacsi ee saxda ah, lambarka taleefanka, iyo saacadaha oo ka muuqda raadinta iyo liistada liiska. Tallaabooyinka xiga waa in la hubiyo in meheraddaadu u muuqato halka ay dadku ka raadinayaan alaabadaada - sida wadahadallada warbaahinta bulshada.
Ugu dambeyntiina, waa awoodda si toos ah loola macaamilayo macaamiishaada adoo adeegsanaya qalabka mobilada iyo IoT. Mid ka mid ah tusaalayaasha aan sii adeegsanayo shaqsiyan waa Keyring barnaamijka mobilada. Marka aan wado, barnaamijka mobilka badanaa wuxuu igu wargeliyaa dalab ama qiimo dhimis laga helayo tafaariiqle u dhow.
The Xaaladda Internetka Waxyaabaha Daraasad ka socota Accenture Interactive ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad saddex-meelood laba meel macaamiisha ay damacsan yihiin inay iibsadaan qalab guri oo isku xiran marka la gaaro sanadka 2019, halka lahaanshaha tikniyoolajiyadda la qaadan karo la rajeynayo inay labanlaab noqoto sannadka marka la gaaro 2016. Accenture waxay saadaalinaysaa in IoT ay si gaar ah u carqaladeyn doonto warshadaha tafaariiqda ee saddex meelood:
Khibrada Macaamilka - Macaamiisha ayaa adeegsada taleefannadooda casriga ah ama kuwa la gashado si ay si dhakhso leh u baaraan shay una wacaan macluumaadka badeecada, dib u eegista ama faallooyinka warbaahinta bulshada. Macaamiisha waxay helayaan kuuboonno shaqsiyeed markay dijkalka galaan. Macaamiilku waxay adeegsadaan aalado aalado taabasho ah oo loogu talagay macaamiisha wax soo saarka la doonayo.
Silsilad sahay ah - Khaanadaha casriga ah ee dukaanka ku jira ee ogaada marka alaabtu yar tahay. Aalado caqli-gal ah oo si iskiis ah u shaqeynaya ayaa gacan ka geysan doona aagaga oo isugu jira kaabid buuxinta alaabada illaa isku-soo-saarka alaabada illaa maareynta maaddooyinka halista ah Baakadaha casriga ah ee ilaaliya macaanimada ama da'da badeecooyinka hallaabi kara.
Kanaalada Cusub iyo Daadadka Dakhliga - Calaamadaha qiimaha casriga ah ee lagu beddeli karo waqtiga dhabta ah iyada oo ku saleysan baahida ama isbeddelada kale. Bakhaar ku xiran, raashinka aasaasiga ah ayaa yimaada markii loo baahdo. Cunnooyinka la soo jeediyey ee ku saleysan waxyaabaha laga heli karo guriga. Iyada oo leh Qalabka Raaxada Guryaha ee kuxiran, dejinta otomaatigga / kormeerka fog ee heerkulka, iftiinka.
Tags: Accenturetafaariiqda elektarooniga ahinternet ee waxiotfurahaapp keyringapp mobiletafaariiqda qadla'aantatafaariiqdadakhliga tafaariiqdataraafikada taraafikadataraafikadasilsiladda